MISY SARY AN'OHATRA MAROBE IZAY MANEHO AMINTSIKA FAHAMARINANA MANAN-DANJA AO AMIN'NY BAIBOLY. Ohatra anankiray amin'izany ny rafi-pivavahana jiosy: tamin'ny andron'ny TT. Sary an'ohatra ihany koa ny biby novonoina tamin'izany rafitra izany, izay nampiseho ny fahafatesan'i Jesosy.
Mampiasa sary an'ohatra maro hafa ny Baiboly ary misy fotoana ampiasany ny ohatra tsotra tahaka ny rano, ny afo ary ny rivotra. Ireny sary ireny dia hoenti-miresaka fahamarinana ara-panahy sy ara-teolojia, arakaraka ny tontolon-kevitra misy azy. Ohatra amin'izany ny nilazan'i Jesosy hoe: "Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay ihaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny Fanahy." Jao. 3:8, rehefa nanazava ny fiasan'ny Fanahy eo amin'ny fiainantsika Izy.
Sary an'ohatra maro koa no ampiasain'ny Baiboly hoenti-milaza ny karazana firaisana hitantsika ao amin'ny fiangonana, ny firaisana izay tian'Andriamanitra aseho eo anatrehan'izao tontolo izao. Ireo sary an'ohatra ireo mitambatra no maneho lafin-javatra maro mikasika ny firaisan'ny fiangonana. Anisan'izany ny fifandraisan'ny fiangonana amin'Andriamanitra, ny fifandraisan'ny mambra samy mambra ary ny fifandraisan'ny fiangonana amin'ny fiarahamonina manontolo. Amin'ity herinandro ity isika dia hijety akaiky kokoa ny sasany amin'ireo sary an'ohatra ireo sy izay ambarany momba ny firaisana ao amin'i Jesosy?
Ny vahoakan'Andriamanitra (1 Pet. 2:9)
Hitantsika ao amin'ny 1 Pet. 2:9; Eks. 19:5,6; Deo. 4:20 ary ny Deo. 7:6 ny momba ireo vahoaka manokana nofidin'Andriamanitra. Midika inona ny hoe anisan'ny vahoakan'Andriamanitra ny olona iray? Nahoana ny fiangonana no manokana eo imason'Andriamanitra?
Ny olona no fiangonana, kanefa tsy izay olona eny rehetra eny, fa ireo olon'Andriamanitra, izay miantso Azy ho Tompony sy Mpamonjy azy, dia ireo izay navotan'i Kristy sy mankato Azy. Fahamarinana manan-danja tokoa no asehon'ny sary an'ohatra momba ny fiangonana antsika: nisy vahoakan'Andriamanitra hatrany teto an-tany. Efa tamin'ny andron'i Adama ka hatramin'ny andron'i Noa ary mandra-pahatonga tamin'ny andron'i Abrahama no nanao fanekena tamin'ny vahoakany Andriamanitra. Nifidy azy ireo Izy haneho ny fahamarinana momba Azy amin'ny olona rehetra. Niriny ny hanehoan'ny olony ny fitiavany sy ny famindrampony ary ny fahamarinany amin'ny olona rehetra ety ambonin'ny tany.
Voalazan'i Petera ao amin'ny 1 Pet. 2:9 fa isika vahoakan'An.driamanitra dia "taranaka voafidy" sy "fanjaka-mpisorona" ary "firenena masina". Maneho izany fa vahoaka voatokana ho amin'ny tanjona miavaka izy ireo: "mba hilazanareo ny hatsaran'Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga"- 1 Pet. 2:9. Fanehoana ny toetran'Andriaxnanitra be fahasoavana ihany koa izany, araka izay voalaza ao amin'ny Eks. 34:6, 7. "Nifidy ny fiangonana ho harenany manokana Andriamanitra, mba ho hitan'olon-drehetra eto an-tany amin'ny alalan'ny fiainan'ny mambra ao aminy ireo toetra sarobidin'Andriamanitra sy ny fahatsarany ary ny famindrampony ho an'ny olona rehetra."- SDBC, b.7, t. 562.
Ny Deo. 7:6-8 dia maneho amintsika fa nifidy ireo taranaki Abrahama ho olony Andriamanitra. Nahoana Izy no nifidy ny Isiraely? Midika inona amintsika amin'izao andro izao izany safidin'Andriamanitra izany?
Tsy misy olona afaka manao na inona na inona mba hahazoana ny fitiavan'Andriamanitra. Maneho amintsika ny Baiboly fa antony tokana no nifidianan'Andriamanitra ny Isiraely mba ho vahoakany manokana: tia azy ireo Izy.
Nahoana isika no tokony hahatsiaro mandrakariva fa noho ny fitiavany antsika no namonjen'Andriamanitra antsika fa tsy noho ny asa manokana ataontsika?
Ankohonan'Andriamanitra (Efes. 2:19-22)
Hitantsika omaly ny fampiasan'ny Baiboly ny sary an'ohatry ny fiangonana hiresahana momba ny vahoakan'Andriarnanitra. Sary iray hafa anehoana ny vahoakanAndriamanitra ao amin'ny TT ny trano na ny ankohonan'Andriamanitra. Sary maneho vato sy trano izany, izay rnanasongadina fa misy fifampiankinana eo amin'ny fifandraisan'ny olona ao anatin'ny fiangonana. Antsoin'i Petera hoe "vato velona"- 1 Pet. 2:5 ny Kristianina. Ahitana ny fahatsaran'ny faharetana sy ny fijoroana eo amin'ny finoana izany sary an'ohatra izany.
Vakio ny Efes. 2:19-22. Inona no loha-hevi-dehibe asongadin'i Paoly ao amin'ireo andininy ireo? Inona no ambaran'io sary io amintsika mikasika ny firaisana eo anivon'ny fiangonana?
Sary roa no natarnbatr'i Paoly ao amin'ireo andininy ireo: (1) ny trano sy (2) ny ankohonana izay monina ao anatin'izany trano izany. Tsy tnahorina trano ny vato anankiray, saingy raha atambatra amin'ny vato hafa izany dia manjary rafitra iray lehibe mahajoro eo anatrehan'ny toe-java.-tsarotry ny fiainana. Tsy misy Kristianina ka ho vato hiasa irery, fa tsy maintsy miara-miasa arnin'ny hafa izy arnin'ny fiarahana amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Mba hahatonga ny trano iray ho mafy dia tsy maintsy miorina ambonin'ny fototra matanjaka izany. Jesosy Kristy no fototra sy "fanorenana" ho an'ny tranon'Andriamanitra (jereo ihany koa ny 1 Kik% 3:11). Ho faty ny fiangonana raha tsy i Jesosy no fototra iorenany. Tena mikasika Azy tanteraka mantsy izany: ny fiainany, ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiaviany fanindroany. Ny fiangonana dia ny fitambaran'ireo mpino maro izay miara-mizara ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra eto an-tany. Jesôsy no anton-dresaky ny fiangonana: ny momba Azy, izay nataony ho antsika sy izay ataony amin'izao fotoana izao, ary izay atolony ny olon-drehetra mandray Azy ho Tompo sy Mpamonjy.
Ahoana ihany koa no mampitovy ny fiangonana arnin'ny ankohonana? Ny ankamaroan'ny fianakaviana dia ahitana rairn-pianakaviana sy renim-pianakaviana, mpirahalahy sy mpirahavavy ary mpianadahy, mafy fatorana ny fifandraisana eo amin'ny mpianakavy. Anrsan'ny ankohonana iray ihany koa ny mambran'ny fiangonana izay mifandray amin'ny fianakavimben'ny olombelona noho ny Adama. Amin'ny maha-Kristianina antsika koa, dia mifandray satria efa tongs "Adama faharoa" i Jesosy. Ao Aminy iain.antsika ny fanandrarnan'ny "fahateraham-baovao". Ammizany no hahatonga antsika ho tafaray ao amin'ny fiainana vaovao.
Tsy ny oion-drehetra anefa no manana fanandramana tsara ao amin'ny ankohonana misy azy. Araka izany, ahoana no hahatonga ny fiangonana ho ankohonana izay tsy mba nananan'ny olona sasany hatraminizay?
Tempolin'ny Fanahy Masina (1 Kor. 3:16,17)
Sary an'ohatra iray hafa ampiasain'i Paoly ny tempolin'Andriamanitra na ny tempolin'ny Fanahy Masina, sary izay maneho trano lafo vidy sy manan-tombambidy. Ao amin'ny 1 Kor. 6:19 dia mampiasa sary maneho ny tenany manokana i Paoly amin'ny maha-tempolin'ny Fanahy Masina izany. Ao arnin'ny 1 Kor. 3:16,17 kosa dia ampiasainy ny sary hilazana ny trano masina sy sarobidy indrindra tany "Proche-Orient" fahiny, dia ny tempolin'Andriamanitra izany.
Vakio ny 1 Kor. 3:16,17. Midika inona ny maha-tempolininy Fanahy Masina ny fiangonana? Inona no ampitandremany ao amin'ny and. 17?
Mazava loatra fa tsy ny trano fiangonana no resahin'i Paoly, fa ny hahatonga ny Kristianina tao Korinto ho "tempolin"'ny Fanahy Masina. Miara-"miaina" Aminy Andriamanitra satria mitoetra ao am-pony Izy.
Ho an'i Paoly, Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny fisakaizan'ny Kristianina sy ny firaisany; mampitandrina izy fa izay mitady handrava izany firahalahiana izany dia hiharan'ny fitsarana. Ny firaisan'ny Kristianina no fon'ny fisakazaina sy ny fifandraisana ao amin'ny fiangonana. Eo anivon'izany firaisana izany Andriamanitra, ao amin'ny "tempoly velona".
Aloha kelin'izay ao amin'ny 1 Kor. 3, dia miresaka ny amin'ny loza mananontan.ona ny firaisan'ny fiangonana i Paoly (1 Kôr. 3:3). tsaiLozana. mananontanona ny fihavanantsika ny fisarahana sy ny tsy firaisan- Ny fitondran-terra sy ny fihetsehampo ratsy dia mahatonga an'Andriamanitra hiala tsy ho ao amin'ny fiangonany. Manimba ny "tempolinn'Andriamanitra ny fifandirana ao amin'ny fiangonana. Tian'Andriamanitra raha mandositra ireo fihetsehampo miteraka fifandirana ny mambra.
Inona no azontsika atao rehefa misy ny fifandirana ao amin'ny fiangonana? Mbola mitombina ho antsika arnin'izao fotoana izao ny torohevitra nomen'i Paoly ny Korintianina hoe: "Ary mananatra anareo aho, ry rahalahy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba hiray teny hianareo rehetra, ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakarnbana tsara hianareo hiray saina sy hevitra."- 1 Kôr. 1:10.
Tokony hanao ny anjara tandrify antsika isika rehetra mba hampitsaharana ny olana izay mandrava ny firaisantsika. Inona no anjara azonao hoentina aminizany?
Ny tenan'i Kristy (1 Kor. 12:12-26)
Azo heverina fa ny tenan'i Kristy no sary an'ohatra be mpahalala indrindra iantsoana ny fiangonana. Manome antsika famelabelarana mazava ny amin'ny firaisana izany sary izany. Izany no antony nanoratan'i Paoly hoe: "Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy"- 1 Kor. 12:12. "Ary hianareo no tenan'i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy."- 1 Kan 12:27.
Mampiasa ny sary an'ohatry ny tena i Paoly ao amin'ny 1 Kôr. 12:12-26 hilazana ny fiangonana sy ny fomba fiasany. Ahoana no fiaraha-miasan'ireo ampahany rehetra amin'ny tena? Milaza inona io sary an'ohatra io momba ny fiaraha-miasan'ny fiangonantsika maneran-tany?
Fahamarinana lalina no asehon'ny fampianaran'i Paoly ao amin'ny 1 Kôr 12. Misy ny tena firaisana kristianina satria mitahy ny fahasamihafantsika ny Fanahy Masina ary manampy antsika hiara-miasa ao anatin'ny firaisan-tsaina. Ampahany maro no mandrafitra ny tenan'ny olombelona, ary samy hafa avokoa ireny. Toy izany koa ny "tenan'i Jesosy", izany hoe ny fiangonana. Ireo rantsana samihafa ao amin'ny fiangonana dia maneho fa mahagaga sady lavorary io "tenan' i Jesosy io".
Mivantana amintsika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito izany sary an'ohatra izany. Haingana tokoa ny fitombon'ny fiangonana tao anatin'ny telopolo taona izay. Ahitana mambra maro samy hafa fiaviana, kolontsaina ary fomba fiaina ny fiangonana Advantista, kanefa tsy tokony havelantsika hampisaraka antsika samy isika sy amin'i Jesosy izany fahasamihafana izany. Tokony havelantsika hifehy antsika ny Fanahy Masina mba hahatonga antsika hifanakaiky bebe kokoa, amin'izay dia ho hitan'ny olon-drehetra fa vahoaka iray ihany isika ao amin'i Jesosy. Azontsika atao ny maneho amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany fa ny filazantsaran'i Jesosy dia manana hery hanasitrana ny olona sy hampiray azy ireo.
Ny ondry sy ny mpiandry (Jao. 10:1-11)
Vakio ny Jao. 10:1-11. Lafiny inona amin'io sary an'ohatra maneho ny fiangonana ho valan'ondry io no miresaka momba ny firaisana? Jereo ihany koa ny Sal. 23.
Milaza tantara momba ny mpiandry ondry i Jesosy ao amin'ny Jao. 10:1- Kely dia kely ny fahalalantsika amin'izao fotoana izao momba ny mpiandry ondry, fa ireo olona tamin'ny andron'i Jesosy kosa dia nahatakatra tsara izay zavatra noresahin’i Jesosy. Araka izany, rehefa niteny i Jesosy hoe: "Izaho no Mpiandry Tsara"- Jao. 10:11, dia fantatry ny olona avy hatrany fa izany teny nambarany izany dia avy ao amin'ny Sal. 23:1 hoe "Jehovah no Mpiandry ahy". Tsy hoe mazava fotsiny ihany izany sary izany fa manana tombambidy ara-pihetsehampo koa izay mahatonga azy ho sary velona. Teo amin'ny kolontsaina tany "Proche-Orient" fahiny, sy any amin'ny faritr'i "Moyen-Orient" amin'izao andro izao ny mpiandry ondry dia fantatra fa olona manolo-tena amin'ny fotoana, fikarakarana ny ondriny, na inona na inona fihaikana miseho. Nanjary iray amin'ireo sary mamin'ny fo indrindra ao amin'ny Soratra Masina hoenti-milaza ny toetran'Andriamanitra sy ny fifandraisany amin'ny olony ny sary maneho ny mpiandry ondry.
Mampiasa ny ondry ny Baiboly ho sary hanehoana ny vahoakan'Andriamanitra. Malefaka sady tsy mahery setra ny ondry ka mila mpiandry tsara mba hiandry sy hitaridalana azy. Misy fotoana mahavery ny ondry satria manondrantsondrana izy indraindray. Mitady ny ondriny very ny mpiandry ary mamerina azy indray ho ao am-bala. Ilain'ny zanak'ondry matetika ny trotroina sy karakaraina mihoatra noho ny hafa. Tsy maintsy mahari-po sy malemy fanahy amin'ny ondry ny mpiandry raha tiany ny hikarakara tsara azy ireo. Amin'ny lafiny maro dia sary tonga lafatra maneho ny fiangonana izany. Tsy misy tokony hatahoran'ny mambran'ny fiangonana satria mahazo ny zavatra rehetra izy amin'ny fifandraisany amin'ny Mpiandry ondry.
Resahin'i Jesosy ao amin'io fanoharana io koa ny amin'ny tokony hihainoan'nyondry ny Mpiandry tsara sy ny hankatoavany Azy. Misy fotoana tsy maintsy angonin'ny mpiandry ondry ho amin´ny toerana iray ny andian’ondry maro mba hiarovana azy ireo. Ahoana anefa no hanavahany ny ondriny amin'izay tsy azy rehefa avy eo? Tsotra ihany. Ny hany tokony hataon'ny mpiandry ondry dia ny mitsangana eo am-baravaran'ny valan'ondry ary miantso. Ho fantatry ny ondriny ny feony ka hanatona azy izy ireo. "Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy, dia mialoha azy; ary ny ondriny manaraka azy, satria mahalaia ny feony ireo."- Jao. 10:4. Zava-dehibe ho an'ny fiangonana ny fihainoana ny feon'ny Mpiandry ondry. Raha ny marina, ny firaisana sy ny fiarovana ny ain'ny vahoakan'Andriamanitra dia miankina amin'ny fanakaikezan'izy ireo Azy sy ny fankatoavany amim-pileferana ny feony.